Ungangitshela ukuthi ngakha kanjani ama-backlink ngo-2016 nge-Web 2. 0 ukuxhumanisa imikhuba?
Ngaphambi kwanoma yini enye, ake sibhekane nayo - Web 2. Imikhuba yokuxhumanisa engu-0 isasebenza! Ngakho-ke, uma ufuna ukuthola ukuthi ungakha kanjani ama-backlink ngo-2016, usebenzise kahle iWeb 2. 0 ukuxhumanisa imikhuba, ake sibheke ngomhlahlandlela omfushane ngezansi. Inhloso yethu ukuthuthukisa izikhundla zakho zewebhu noma ibhulogi - ngaphandle kokulimaza isipiliyoni somsebenzisi esiphezulu sosesho bukhoma. Futhi-ke, ufuna ukuba konke okukhona ukuvimbela ukusola ukuthi usebenzisa noma yiziphi amaqhinga noma izinhlelo ezingamukeleki. Ngaleyo ndlela, ungase uhambe ngokuphulwa nemikhombandlela esemqoka ye-webmaster futhi ngaleyo ndlela uzitholele isijeziso esibi kakhulu - piastra elettrica singola. Yingakho ngizokukhombisa ukuthi ungakha kanjani ama-backlink ngo-2016 ngendlela engcono kakhulu futhi ephephile, hhayi ukuze uphonswe nge-Google.
Gcina engqondweni, ukuthi, ukuze uzuze ekwakheni iwebhu 2. Ama-backlink angu-0 kufanele usebenze ngaphakathi kweqhinga elihle elihlelekile le-SEO. Futhi lokho kuzodinga ukuthi utshale isikhathi esiningi nomzamo ekudaleni kuphela izixhumanisi ezisebenza kahle ezinganikeza inani langempela kuzivakashi zakho zekhasi. Uma kungenjalo, iwebhusayithi yakho izophakamisa ifulegi elibomvu nge-Google, futhi lokho kuphelela njalo ngesigwebo sezinhlawulo - ngokushesha noma kamuva. Yingakho kufanele uhlale usulekile kulawo mawebhusayithi amaningi athembisa amaphakheji ahlukene adayiswa ngobuningi, noma ngisho nezinqola ezinkulu ze-backlinks ezikhokhelwayo ze-HQ - ngezinkulumo zabo ezinosizi zithi zonke izimpendulo zabo zivela kuphela kumawebhusayithi ahloniphekile futhi aphezulu kakhulu we-PR namabhulogi.
Yilona nje izwi lami elihle lokuxwayisa ukuthi ungalutholi kalula - ukugijimela ukuthengiswa okusheshayo kusho ukuthi awugcini nje ukuchitha imali eyimali eyinkimbinkimbi, kodwa wenze konke okungenakwenzeka futhi okungenzeka ukwenze okubi kunalokho kunokuhle. Ngakho-ke, ake sibuyele emuva - sakha i-Web 2. 0 izixhumanisi empeleni ezikwazi ukuletha imiphumela engcono kakhulu yokwenza kahle ku-SEO. Ngezansi kufika uhlu lwamaphuzu amakhulu okubamba ukuqonda ukuthi ungakha kanjani ama-backlink ngo-2016 - indlela efanele.
Misa ukutholakala kwe-inthanethi
Setha isisekelo esifanele sokuba khona kwezenhlalo okusebenzayo nokuhlala isikhathi eside kwewebhusayithi yakho enkulu yebhizinisi noma ibhulogi. Isinyathelo sakho sokuqala lapha ukugcwalisa amaphrofayli akho kwiWebhu enkulu 2. 0 izingosi zomphakathi ezihlobene niche yakho noma ingxoxo yesihloko jikelele. Ngakho-ke, ngizobona ukuthi ngakha kanjani ama-backlink ngo-2016 kusukela ekuqaleni - ake siqale ngokugcwalisa amaphrofayela akho ezindaweni ezilandelayo zenhlalo:
gcwalisa ikhasi lakho siqu ku-Google Bhizinisi Lami;
udale ikhasi lakho ku-Yelp;
agcwalise ama-akhawunti omphakathi ku-Twitter, Facebook, LinkedIn;
uqhubeke nokugcwalisa ukuqinisekiswa kwe-Alexa page;
vakashela i-TripAdvisor (kufanele uyenze uma ubhekene ne-B2B, noma ibhizinisi lakho linesakhiwo sezitini nesezidakamizwa). Uma ngabe wonke ama-akhawunti omphakathi kanye namakhasi wephrofayela asendaweni, sekuyisikhathi sokufaka izixhumanisi emuva kwisayithi yakho eyinhloko. ngamunye. Ukwenza kanjalo, ungakhohlwa ukuhlanganisa izixhumanisi zakho ezisanda kudalwa kumbhalo wegama elingukhiye. Ukusikisela: ube nebhulogi elizwakalayo noma amakhasi asekelwe kahle ayenemibuzo nezimpendulo (njenge-Quora). Lokho kusebenza njengesihogo!
Yakha amakhasi omphakathi
Ekugcineni, konke okudingeka ukwenze ukugwema ngokuphelele ezweni le-SEO, futhi usebenze kahle ngokuqukethwe kwekhwalithi okunikeza inani kubasebenzisi. Ukuze wenze konke kubonakale kungokwemvelo, kufanele ugxile kulokhu okulandelayo:
ukuthumela okuqukethwe okuthakazelisayo ukuze kuhlanganiswe ngezikhathi ezithile;
ukwakha okungaphezu kwamahlanu ukuxhumana ngesonto;
ukushicilela okuthunyelwe okuphromoshini kuma-blogs we-Tumblr, amakhasi e-fan on Facebook, amabhulogi we-WordPress, ama-akhawunti ku-Instagram, neziteshi zevidiyo ku-YouTube.